Ndiyabulela uPIVian Brian Colwell (Crypto Hobbit) ngokuhlanganisa le vidiyo! I-Nuggets News I-Australia izisa “i-Snappy” uBryan Doreian ukuthetha imbali ye-PIVX, ubumfihlo, kunye nokuphuculwa kwekhredithi ekulindeleke! Ngaphandle kwe-Rebrand evela...
Ubumfihlo bunjani uhlobo olungaqhelekanga. Sithemba ukuba singacingi ngalo xa kungengxaki, kwaye sihlala sinokucinga ukuba asibukeli. Eyinyaniso, ngelanga, ayikho into elula. Inyaniso kukuba, sonke sijongwa kwaye sihlaziywa imihla ngemihla. Iinkampani ezinkulu ezifana...